Khadka Waxsoosaarka Gudaha iyo Qaranka Waxaa Lagu Furay Warshaddii Dabka ee MKE Gazi | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKhadka Waxsoosaarka Gudaha iyo Qaranka Waxaa Lagu Furay Warshaddii Dabka ee MKE Gazi
09 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, SAWIRADA, GUUD, Kara, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
khadka wax soo saarka gudaha iyo tan qaran ee loo xilsaaray warshadda mke gazi fisek
Marka la eego baaxadda mashruucan cusub ee Warshadda Warshadaha Mashiinka iyo Warshadaha (MKEK), khadka cusub ee waxsoosaarka oo lagu sameeyay mashiinno gudaha ah iyo kuwa qaran ayaa ka shaqeynayay Warshadda Gazi Fişek.
Furitaanka khadkan cusub ee wax soo saarka, kaas oo gabi ahaanba baabi'in doona ku tiirsanaanta dalka dibadiisa oo gebi ahaanba laga abuuray mashiinada gudaha iyo qarankaba, iyadoo la eegayo cabirka coronavirus, Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Akar, Taliyaha Guud ee Ciidamada General Yaşar Güler, Taliyaha Ciidamada Dhulka Gen. Umit Dündar, Taliyaha Ciidamada Badda Admiral Adnan Özbal, Taliyaha Ciidamada Cirka. Kucukakyuz iyo wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Qaranka Yunus Emre Karaosmanoglu ayaa lagu qabtay qaabkii shirkii fiidiyowga ee ay ka soo qeyb galeen Alpaslan Kavaklioglu iyo Shuay Alpay.
Furitaanka ka hor, Wasiir Akar wuxuu ka helay macluumaadka Maareeyaha Guud MKEK Yaasiin Akdere khadka khariidadda cusub iyo shaqadiisa. Hambalyeeyay kuwii ka qeyb qaatay ay sabab u tahay dadaalka guul of muhiimadda ay leedahay degmada iyo qaranka si uu shuqulka sameeyey ilaa Akar Wasaaraha, waxa uu sheegay in ay jiraan kuwo horumar muhiim ah ee warshadaha iyo technology ee Turkey.
Isagoo caddeeyay in shaqooyinkaani ay ka muuqdaan warshadaha difaaca, Akar wuxuu yidhi, “dadaalkayaga ku jira qaabdhismeedka warshadaha difaaca waxay heleen horumar aad u wanaagsan oo xagga hogaaminta, taakuleynta iyo dhiirigalinta ah ee Madaxweynahayaga, waana mahadsan nahay, heerka gudaha iyo dhalashada ee warshadaha difaaca waxay gaareen 70 boqolkiiba. Annagu kama helin wax ku filan. Waxaan ku sii wadi doonnaa shaqadeena xawaare kordheysa iyo xawaare waxaan aaminsanahay inaan ku qaadi doono heerar aad u sareeya. ” tibaaxaha loo adeegsaday.
Isaga oo taabanaaya ahmiyada ay leedahay in wadaniga iyo wadankaba naqshadeeda laga sii wado dhanka difaaca, Wasiirka Akar ayaa yidhi:
Warshadda Gazi Fişek, oo boos macno leh ku leh warshadaha dalka iyo tan gudaha, waxay leedahay jago aad u muhiim ah marka loo eego buuxinta baahiyaha ciidamadeena. Marka tan la eego, macnaha iyo muhiimadda ay leedahay in adeeg la keeno warshaddan qaaska ah oo macnaha badan leh kuma koobna mashiinka shisheeye laakiin sidoo kale mashiinada gudaha iyo kuwa qaran iyo bixinta wax soo saarku aad ayey muhiim u yihiin. Intaa waxaa dheer, waa il kale oo sharaf noo ah inaan kor u qaadno wax soo saarka 40 boqolkiiba iyada oo waxsoosaarka lagu sameeyay shaqooyinka gudaha iyo kuwa qaran marka loo eego shaqooyinka shisheeye. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in dhammaan baahiyaha gudaha iyo dibaddaba si dhakhso leh loogu fulin doono qadka wax soo saarka cusub, Wasiir Akar ayaa yidhi, "Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in tani ay tahay tillaabo muhiim u ah labadaba xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga." ayuu yiri.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in saamaynta taban ay ku leedahay ku tiirsanaanta looms-ka dibedda laga soo saaray sanadihii la soo dhaafay, ayuu Wasiir Akar yidhi, “Markaan haysano ku tiirsanaan, waxaan la kulanay xaalado ay ka mid yihiin sidii aan u heli lahayn agabkii aan siinay. Haddii aan ku dhaqaaqno xawaarahaan, waxaan rajeyneynaa in dhammaan agabkeenna wax soo saarka ay awood u yeelan doonaan inay iskood wax uga qabtaan, waana sii horumarin doonnaa. ayuu hadlay.
Isagoo xusuusinaya in Wasaaradda Difaaca Qaranka ay soo saartay sahay caafimaad oo ka hortag ah oo kala duwan marka loo eego baaxadda dagaalka lagula jiro cudurka coronavirus, Wasiirka Akar ayaa yiri:
“Waxaan sidoo kale la kulanay baahi muhiim ah anagoo sameynay keydka maaskaro qalliinka. Ilaa laba bilood ka hor, maqnaanshaha mashiinka mashiinka mashiinka ayaa ahayd dhibaato kale. Xoogaa lacag ah ayaa la codsaday. Hadafka aan hada gaarnay, dhismaha mashiinada soosaaraya maaskaro qalliinka oo aad adigu beddeshay isle'eg oo dhan ayaa u fududaysay hawsheena. Tallaabo aad u muhiim ah ayaa la qaaday si loo haqabtiro baahiyaha ciidankeena kaliya maahan ee sidoo kale dadkeena, wadamada saaxiibka la ah iyo walaalnimada. ”
HADDII AAD U SOO JEEDINAYO HEERKA SHURUUDAHA SAHRA
Isagoo adkeeyay adkeynta dadaallada lagu kordhinayo waxsoosaarka daryeelka caafimaadka ee warshadaha ku xiran Wasaaradda Difaaca Qaranka, ayuu Wasiir Akar yiri:
- Waxaan ilaa hadda soo saarnay ku dhawaad ​​30 milyan oo maaskaro ah ilaa hadda. Waxaan soo saarnay in kabadan 500 kun oo koronto iyo 140 tan oo jeermis-dileyaal ah. Waxaan aaminsanahay inaan sii wadidoono waxsoosaarkan si xawli ah isla markaana aan u kordhin doonno tirooyinka xitaa ka sareeya. Xilliga soo socda, tirooyinkaan ayaa aad uga badan doona. Mudane Madaxweyne wuxuu hayaa tilmaamo kala duwan. Anaga oo kordhinayna howlaheena degdegga ah iyo isku dubaridka wasaaradaha iyo xarumaha ay khusayso, waxaan isku dayi doonnaa in aan si tayo leh u fulinno waajibaadkayaga xagga wax soo saarka iyo qeybinta labadaba. "
Wasiirka Akar wuxuu xasuusiyay in MKEK ay soo saartay tusaalaha ah qalabka neefsashada mashiinka ee loo yaqaan "Sahara", isagoo leh "Soo saarida heerkulbeega gudaha iyo qaran iyo kamaradaha kuleylka ayaa loo duubay guul gaar ah oo MKEK ah". Wasiir Akar, oo ku saabsan "Sahara", "Hawsha shahaadada ayaa sidoo kale gaadhay marxalad cayiman. Waxaan si dhakhso leh u awoodi doonnaa inaan la kulano baahiyaha dalkeenna, Ciidammadeenna Hubka iyo saaxibtinimada iyo xulafada nala ah, anagoo soo saareyna 500 aaladood isbuucii. ” ayuu yiri.
Aqoonsi dheeri ah oo laga helo adduunka adduunka
Thanks to khadka cusub ee la aasaasay, waxaa loo qorsheeyay in la kordhiyo awooda wax soo saarka seddex jeer. Thanks to khadka cusub ee soo saari doona 7.62 mm x 39 Khariidooyinka Kalashnikov, 7.62mmx51 kartooriyada NATO, 7.62 iyo 5,56 mm Gawaarida Maneuver ee la soo bandhigay, baahida gudaha iyo dibaddaba waxay noqon doontaa mid aad u deggan oo tayo sare leh wax soo saarna waa la xaqiijin doonaa. Thanks to mashruuca baabi'in doona ku tiirsanaanta shisheeyaha ee xamuulka, Ujeedada MKEK waa in la kordhiyo tartankeeda.
Mashruucan, MKEK, oo heshay qaab wareejin kara ma aha oo kaliya wax soo saarka laakiin sidoo kale tikniyoolajiyada waxsoosaarka, waxay meesha ka saartay ku tiirsanaanta shisheeyaha ee wax soo saarka iyo kaararka wax soo saarka baakooyinka maalgashigan.
In kasta oo dhammaan xisaabiyeyaasha lagu soo gudbiyay mashruucu ay yihiin 100 boqolkiiba gudaha, haddana waxaa la sheegayaa in kuraasta wax soo saarka ee xirmooyinka ay yihiin kuwo tayo sare leh oo ka tayo badan kuwa dhiggooda adduunka.
Foosto lagu tuuray xaflad aroos ah oo ku taal magaalada Bursa ayaa lagu qarxiyay gaari cabsi
Waajibaadka 399 Shuhado, Askarta iyo Askarta Askarta
Xuddunta magaalada dhexdeeda iyo qulqulka gawaarida loo yaqaan 'Izmit gar'
New Diesel Train Set wuxuu shaqeynayaa inta udhaxeysa Adana iyo Mersin
TCDD iyo MKE waxay saxiixeen qandaraas la xiriira wax soo saarka gawaarida
UTİKAD waxaa la bilaabay dhibaatooyinka bakhaarada
Shiinaha, tareenka Trabzon-Batumi ayaa soo galay!
Machadka iyo Warshadaha Kumbuyuutarka
Frima Avikon Gaziantep Smart Stations
Saldhigga Guriga iyo Xarunta Qaranka